निर्मला प्रकरण : पूर्व एसपी डिल्लीराज विष्ट धराैटीमा रिहा
भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ का १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर र यातनाविरुद्धको कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालतले आज पूर्वप्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई रु. १० लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
निर्मला प्रकरणको निष्कर्ष कहिले आउने भनेर समय तोक्न सकिन्नः आइजिपी खनाल
काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।
राैतहटका विद्यार्थी निर्मलालार्इ न्याय माग्दै उत्रिए सडकमा
रौतहट । निर्मला पन्तकोे हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै रौतहटमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
मानसिक समस्या देखिएपछि निर्मलाका बुवा काठमाडौंमा
कञ्चनपुर । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी छोरीको न्यायको निम्ति अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका निर्मलाका बुवामा मानसिक समस्या देखिदै गएपछि उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । चिकित्सकहरुको सल्लाहमा शनिवार निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँको पठाइएको कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार यज्ञराजको काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुनेछ ।
निर्मला हत्या प्रकणः घटनास्थल आसपास बस्ने देखि आफन्तको समेत डिएनए परीक्षण गरिने
काठमाडौं । निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धान परिणाम ९७ दिनसम्म पनि शुन्यमै रहेपछि प्रहरीले कञ्चनपुरमा सयौँ व्यक्तिको डिएनए परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाव’ सुरक्षित राख्न प्रहरीलार्इ आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सङ्कलित ‘भेजिनल स्वाव’ को नमूना सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्मला हत्या प्रकरणः छानविन प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न, कति थरी छन् पोस्टमार्टम रिपोर्ट ?
काठमाडौं । निर्मला पन्त बलात्कार, तथा हत्या प्रकरणमा छानविन गर्न सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठित समितिले यसअघि नै मिडियामा आएका सुचना समेटेर सारसंग्रहवादी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
निर्मला पन्त प्रकरण : थप दुर्इ प्रहरी निलम्बनमा
काठमाडौँ । निर्मला पन्तको हत्याबारे अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक हरसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउद निलम्वनमा परेका छन् ।
सरकारले पत्ता नलगाएकाे निर्मला पन्तकाे हत्यारा विप्लव नेकपाले पत्ता लगाउने
काठमाडौँ । सरकारले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने उद्घोष गरेको छ । नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले कञ्चनपुर हत्याकाण्ड भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पन्त परिवारले न्याय नपाएकोले अब आफ्नो पार्टी हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
निर्मला पन्त प्रकरण छानबिन गर्न बनेकाे समितिले बुझायाे प्रतिवेदन, प्रहरी अनुसन्धान त्रुटीपूर्ण
काठमाडौँ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।